Gini mere iji zuo ahia n'aka anyi? - MOLONG TATTOO SUPPLY CO., LTD
Ngwaahịa kachasị mma dịka ụlọ ọrụ na-ere ahịa n'ahịa zuru ụwa ọnụ, anyị na-enye ihe karịrị 100 puku ngwaahịa na ngwaahịa dị elu na ngwaahịa aha ama ama, niile na ọnụ ahịa ahịa. Ahụmahụ ọkachamara ọrụ na àgwà ngwaahịa mere na China taa.
Zipu ajụjụ, ahịa anyị ga-akpọtụrụ gị ozugbo ma nye gị ọrụ ndidi na enyi. Anyị na-anabata nhọrọ ịkwụ ụgwọ echekwara PayPal. Anyi na anakwere ugwo Bank na Western Union. Bido taa!
Anyị na-eji DHL, FEDEX, UPS na EMS ebuga obere ngwugwu anyị. Site na MOLONG TATTOO SUPPLY's wareroom ruo isi ebe na North America, Europe, Asia na Australia, mbupu na-ewe 3 ụbọchị asaa na-arụ ọrụ. Site Ikuku na site n'oké Osimiri dị kwa!
Nọ ná Ntụkwasị n'usoro
Nchebe bụ ihe kacha mkpa na MOLONG TATTOO SUPPLY. Anyị na-ahụ na nchekwa nke data azụmahịa niile. Anyị na-anwa ike anyị niile iji mee ka ngwongwo gị nyefee n'enweghị nsogbu n'oge. Anyị na-eme ka zụọ ozi gị na nzuzo. Uretọ na n'aka anyị!